GNUSim8085 - 8085 Microprocessor Simulator | Linux Vakapindwa muropa
GNUSim8085 graphical simulator, assembler uye debugger yeASM kodhi yeIntel 8085 microprocessors.Inowanikwa yeLinux uye zvakare yeWindows. Uye kunyangwe aya maIntel machipisi asiri eazvino chaiwo, anogona kuve nzira yakanaka yekutanga kuzviziva nemagadzirirwo nemitauro yemusangano sezvo ari akapusa kupfuura akawanda madhizaini azvino.
Ehezve, kana iwe uchitova neruzivo kana uchida kutanga nechimwe chinhu chazvino, iwe unofanirwa kuziva kuti ivo varipo simulators Zvakafanana ne, semuenzaniso, ISA RISC-V. Asi mune ino chinyorwa, ini ndichatarisa pane ino yemahara uye yemahara chirongwa inoshandisa iyo "pre-x86" rairo yakatarwa inoshandiswa neaya ma CPU ...
ari features GNUSim8085 zvakakosha ndezvi:
Iyo ine yakapusa kodhi mhariri iyo inokwanisa kuratidza iyo yekodhi kodhi syntax yeaya ma8085 machipisi.
Izvo zvinobatsirawo kuisa gungano remitauro yemitauro ine nharo dzakakodzera (ona keypad).
Iyo inokutendera iwe kuti uone zviri nyore zvirimo mukati meCPU marejista paunenge uchiita iyo kodhi iwe yawakagadzira.
Iwe unogona zvakare kuona izvo zvemireza.
Iwe unozogona kunyange kuona stack, iyo huru ndangariro uye kero dzeiyo I / O system.
Inosanganisira decimal-hexadecimal converter uye zvinopesana.
Sezvandambotaura kare, zvakare inobvumidza kukanganisa.
Unogona kumhanya chirongwa ichi muASM nematanho.
Nekingori kudzvanya iwe unogona kushandura iyo inosanganisa kuita rondedzero ine opcode.
Uye iyo yayo GUI inoshandurwa mumitauro yakati wandei ... Kubva pairi unogona kudzora uye kuona zvese, pasina kushandisa rairo yekuraira.
Nayo unogona kutanga kudzidza mashandiro emidziyo kubva mukati, uye kudzidzira ASM yako. Uye kana usina ASM kodhi bhuku kwema 8085 machipisi, kune zvakawanda zviwanikwa pawebhu kudzidza. Semuenzaniso mu GitHub Iwe unozotowana mafaera ane akasiyana kodhi mienzaniso kutanga ne ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » GNUSim8085 - 8085 Microprocessor Simulator